Chikwata cheZamalek cheBasketball chekuEgypt Chosimudza Mukombe weBasketball Africa League weKutanga
Mumakwikwi ekutanga eBasketball Africa League kana kuti BAL Championship akatambirwa muKigali Arena kuRwanda nemusi weSvondo, chikwata cheZamalek chekuEgypt chakakunda US Monastir yekuTunisia 76- 63 ndokusimudza mukombe wekutanga muAfrica uyu.
Mukombe uyu wakagadzirwa semuonde, muti unowanikwa muAfrica chete uri mucherechedzo wehupenyu uye uchipa vanhu pekupotera, mvura nezvekudya kuvanhu nemhuka.
Mukupera kwemakwikwi aya, pakapihwahwo mibayiro kune zvizvarwa zvemuAfrica zvakaita mukurumbira muNational Basketball Association kana kuti NBA muAmerica zvinoti, Hakeem Olajuwon wekuNigeria, Dikembe Mutombo wekuDemocratic Republic of the Congo uye Manute Bol wekuSouth Sudan.
Zimbabwe yakakundikana kuenda kumakwikwi aya mushure mekukundwa nechikwata chekuMozambique.
Murairidzi wechikwata cheMercenaries Basketball icho chakakundikana kuenda kumakwikwi aya VaInnocent Sithole vanoti vane zvizhinji zvavakadzidza uye vane shuviro yekuti chikwata chavo chichakwanisawo kuenda kumitambo yegore rinouya.
Vanoti dambudziko guru ririkutarisana nemutambo webasketball idambudziko rerutsigiro sezvo zvinhu zvakawoma munyika.
"Tino tarisira kuti hurumende nevemabhizimisi vakawona mafambiro akanaka akaita makwikwi eBasketball Africa League achangopera kuRwanda vanowanikwawo vachipa rutsigiro kuzvikwata zvemutambo uyu kuitira kuti tiwanewo zvikwanisiro zvakakwana patichazoenda kune imwe mitambo yekuyedzana simba mwedzi mitatu inotevera kuti tipinde mumakwikwi egore rino uya," VaSithole vaudza Marvellous Mhlanga-Nyahuye weStudio7.
Hurukuro na VaInnocent Sithole